नेपाल बस्ने केटा होर उमेर मिल्नलाइ,हामी बिदेश बस्नेको भाग्यमा १० वर्ष कान्छि केटि जुराएको हुन्छ – Bhindai Kura
नेपाल बस्ने केटा होर उमेर मिल्नलाइ,हामी बिदेश बस्नेको भाग्यमा १० वर्ष कान्छि केटि जुराएको हुन्छ
श्याम तिमल्सिना (अविरल )
विवाहित पुरुषसङ्गको मेरो प्रेम भाग १ अठारौं बसन्त रितु पार म उन्नाइसौमा पाइला टेक्दै थिए।हरेक दिन टिकटकमा अनेकथरी भिडियो बनाउदै फेसबुकका भित्तामा रङ्गाउने मात्रै नभई म्यासेज बक्समा आएका केटाहरुको लर्को सन्देशहरु एकपछि अर्को गर्दै रिप्लाइ गर्थे।
केटाहरु आफ्नो जात देखाइ हाल्ने,
हाइ भन्न नपाइ ,तिमी राम्रि छौ भन्न पछि पर्दैनन् थिए
चिनजानै नभइ के गर्दै छौ? सिङ्गल हो?
बि.एफ त पक्का होला? यदि बि.एफ छ भने भने कोहि कुरा नै गर्न बन्द गर्थे त कोहि बल्क नै गरिदिन्थे।
कोहि फेरी अचम्मकै थिए ।
प्रत्यक दिन माइडेमा राखेको भिडियोमा लभ रियाक्ट गर्ने,
त्यो बाहेक कुनै पनि कुराकानि हुदैन थियो …
करिब ९-१० वटा‌ भिडियोमा रियाक्ट गरिसकेपछि,
मलाइ कुन तत्वले ढकेल्यो,म्यासेज गर्न मन लाग्यो।
रिजन आचार्य…..भिडियोमा रियाक्ट मात्र गर्ने हो कि बोल्ने पनि हो?
हजुर बोलेकै छु त…वाल खोले,कोरियावासि रैछ,फोटोबाट पत्ता लगाए।
कुरा गर्ने जागर झन् बढ्यो।के गर्दै हुनुहुन्छ? काम गर्दै छु हजुर…गधा जसरी सङ्गै हाहावाला इमोजि पनि थियो कति भयो उता जानु भएको?
अ…… ४ वर्ष पुरा भयो।एक्काइ वर्ष थिए यहाँ आउदा?
जिस्किने हेतुले आधि उमेर त सिधियो,घरजम गर्ने होइन?
कहाँ त्यति सजिलो छ,आमाले भनेको जस्तो बुहारी पाउन?
कस्तो चाहियो रे हजुरको आमालाइ,हामी जस्तो त हुदैन होला?
घरैमा घरधन्दा गर्ने ब्याजलर पास गरेकि केटि चाहियो रे… गाह्रो रैछ,आफ्नो यहाँ प्लस टुमा कति तारा आउनेको ठेगान थिएन ।
अनि भन तिम्रो उमेर कति भयो?
तपाइ भन्दा धेरै कान्छि छु,नसोध्धै बेस…
के भयो र नेपाल बस्ने केटा होर..उमेर मिल्नलाइ,हामी बिदेश बस्नेको भाग्यमा १० वर्ष कान्छि केटि जुराएको हुन्छ।
कहिकतै रिस पनि उठ्यो त्यो भन्दा बढि चित्त पनि बुझ्यो। त्यसो हो भनि हजुरलाइ मिल्दो उमेर हो…तेइ ६ वर्षको फरक फेरि उमेरले के छेक्नुहो मन मिले?
केटा‌ झन् रोमान्टिक हुदै,भिडोयो कल‌ गर्न मिल्छ होला?हजुर मेरोमा वाइफाइ छैन,डाटा‌ लिग्न धेरै पैसा‌ लाग्छ।
नम्बर भन मैले पनि विनातर्क नम्बर भनिदिए। इसेवाबाट ५००को रिचार्ज भएको जानकारी दियो। मैले पनि अनलिमिटेड डाटाप्याक लिगे।भिडियोमा कुरा हुदै गर्दा…बाफ्रे हो टिकटकको भिडियोले मन लोभ्याएको थियो,अहिले त मननै तिमी तिर गयो ।
म पनि आखा फर्फराउदै,मुस्कुराइदिए..
फोन आयो,भिडोयो डिसकनेक्ट भयो।
फोन‌ गर्ने मेरो बोइफेन्ड,मेरै उमेरको थियो।फस्ट डिभिजनमा प्लसटु साइन्समा‌ पास गरेर नेपाली पढाउदै छ,३ काल्सलाइ तै पनि चार हजारमा ।
यहि हो नेपालमा बस्ने टपरको हालत।बाबाले दिएको खाजाको पैसा जम्मा गरेर मलाइ फोन गर्न रिचार्ज किन्छ,एनसेलको लोन तिर्दा जस्तातस्तै हुन्छ र पुन लोनबाटनै मलाइ भोइस प्याक लिएर फोन गर्छ ।
लामै समय हाम्रो रिलेसन भइसकेको हुदा कहिकतै मनमुटाभ पनि भयो।फाट्टफुट्ट बोल्ने गरेकाले,सन्चोबिसन्चो पछि फोन काटियो।
मलाइ हतार भइसकेको थियो रिजनसङ्ग कुरा गर्न,मेसेन्जरमा अफलाइ भइसकेको थियो ।टिकटिकको अर्को भिडियो मैले मेरो डेमा राखिदिए ।करिव घन्टा‌पछि रिजनकै रियाक्ट सहितको म्यासेज आयो।
मायाको डोरीले होइन तिम्रो अङ्गालोले बाधन ….अो… मायाको डोरीले तिमीलाइ बाधौला भन्ने गितमा मेरो टिकटक राम्रै भएको रैछ।
नेपाल त आउनु भनेर मैले आखा‌ झिम्काएको‌ इमोजि पठाए…त्यतिकैमा मेरो बिएफ अर्थात् सबिनको म्यासेज आयो..किन रिप्लाइ ढिलो ।
होइन क्या बेबि म खाना‌ पकाउदैछु भनेर पुन रिजनसङ्ग भिडियोकलमा जोडिए।करिव १ घन्टामा मेरो सबै बाल्यकालदेखि बयस्कसम्मको कुरा अोकल्यो तर उसको‌ भने घर पोखराबाट केहि भनेर ।पछिल्लो दुइ दिनसम्म पनि उसले मेरो डेमा रियाक्ट नगरेपछि,मैले उसको वाल खोले‌, एक्टिभ टु डे अगो भनेर देखायो ।
फोटोहरु एकपछि अर्को गर्दै हेर्न लागे ।
फोटो मात्रै नभएर कमेन्ट पनि पढ्न लागे ।
पछिल्लो समय राखेको फोटोमा‌ हेन्डसम भिनाजू लेखिएको थियो।
म अचम्म पर्दै अरु कमेन्टहरु हेर्न लागे हजुरहरुको कमेन्टले नै लेख्ने उर्जा बढ्नेछ।जति धेरै शिएर भयो त्यति नै लेख्नको लागि हौसला बढ्नेछ ।आगामी भागको प्रतिछ्या गर्नुहोला लेखक:श्याम तिमल्सिना (अविरल )
हवाई उडान र सीमा नाका जेठ १८ सम्म बन्द गर्ने निर्णय
दुइ महिने शिशुमा पनि कोरोना संक्रमण , संक्रमितको संख्या ९९ पुग्यो